Salaamanews » Soo dhaweynta wafdiga dowladda ee Kismaayo ayaa muujisay inaanu khilaaf jirin (xog)
Home » Maqaallo, Warar Soo dhaweynta wafdiga dowladda ee Kismaayo ayaa muujisay inaanu khilaaf jirin (xog) Print - Daabace: SalaamaNews - Dec 28th, 2012 // Ka Jawaab	Qoraallo La Xiriira
Soomaalidii oo ka cararay Xudur markay al-Shabaab gacanta ku dhigtayKaalimaha shidaalka ee Muqdisho oo darawallada u baddalay jeerigaanada Warbixin: Qabyaalad iyo qab-qable qaranimada ayay dhaawacaan Sonkorta Soomaaliya laga soo dhoofiyo ayaa maalgalinaysa al-Shabaab, madaxda Kenya ayaa sidaas lehInta badan dadka reer Jabuuti ayaa sabool ah iyadoo ay jiraan guullo dhaqaale oo qaran
(Salaamanews)-Khamiistii shalay waxaa magaalada Kismaayo ee xarunta gobolka Jubadda hoose yimid wafdigii ugu sareeyay oo magaalada soo gaaray tan iyo markii ay qabsadeen ciidamada huwinta ah oo magaalada si xoog ah uga qabsaday kooxda Al-shabaab.
Magaalada Kismaayo oo gacanta dowladda gashay muddo ka dhaw seddex bilood ka hor ayaa waxaa muran uu ka jiray maamulkeeda waloow ugu dambeyn la sameeyay maamul kumeel gaar ah hadana waxaa isqab qabi xoogani uu ka dhashay maamul loo dhanyahay oo loo sameeyo Jubooyinka.
Maamul u sameynta Jubooyinka waxaa kaalin muuqata ku leh bulshada ka soo jeedda gobolka oo kaashaneysa dowladda Soomaaliya, waxaase la soo muujinayay maalmihii dambe in ismaan dhaaf uu u dhexeeyo dowladda iyo ururka Raaskambooni.
Gudoomiyaha ururka Raaskambooni ahna sii hayaha maamulka Kismaayo Axmed Maxamed Islaam, ayaa warbaahinta u sheegay inaanu jirin khilaaf u dhexeeya dowladda iyo maamulkiisa, wuxuuna sheegay inuu ka qeyb qaatay soo dhaweynta madaxda dowladda.
Sheekh Axmed Madoobe waxa uu sheegay in mad-madowgii ka dhex jiray labada dhinac uu dhammaaday, xiriirka ka dhexeeya maamulka KMG ah iyo dowladda federaal-kana uu yahay mid wanaagsan.
Axmed Maxamed Islaam (Axmed Madoobe) gudoomiyaha raaskambooni oo sheegaya inaanu is khilaafsaneyn iyaga iyo dowladda
Sheekh Axmed Madoobe ayaa warbaahinta gudaha ku eedeeyay inay buun-buuniyeen warar aan sal iyo raad lahayn, wuxuuna xusay in warbaahinta looga baahan yahay inay ka shaqayso nabadda.
Dhinaca kale, afhayeenka ururka Raaskambooni Cabdinaasir Seeraar ayaa sheegay in wafdigii dowladda ee shalay Kismaayo tagay ay xalay ku hoydeen magaalada, wuxuuna sheegay inay kala hadleen qodobbo ay kamid ahaayeen ammaanka iyo sidii loogu qaban lahaa dadka ku dhibaataysan gobolka Jubbada Hoose.
Waxa uu sheegay inaanay ka wada-hadlin arrinta maamul u samaynta gobollada Jubbooyinka oo uu sheegay inay ku salaynayaan dastuurka dalka, isagoo intaa raaciyay inaysan ka wada-hadlin in ciidamadooda ay ku biiraan kuwa dowladda.
Wafdiga ay ku jiraan wasiirka cadaaladda iyo garsoorka Cabdullaahi Ebyan,wasiirka gaashaandhigga, Cabdixakiin Xaaji Maxamuud Fiqi, wasiirka arrimaha gudaha, Cabdikariim Xuseen Guuleed iyo wasiirka warfaafinta Cabdullaahi Cilmooge Xirsi ayaa shalay booqasho ku tagay magaalada Kismaayo.
Tags: maqaallo, warar « Qoraalkii HoreSomaliland oo diiday in Muqdisho ay tagaan siyaasiyiin caan ah	Qoraalka Xiga »South Africa oo ku hanjabtay in tallaabo adag ay ka qaadeyso qaadka	Halkan Hoose ku Jawaab